ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES): အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES): အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား?
PCES ညစ်ညမ်း၏ Self-ရိပ်မိသက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်းပိုင်ထိုက်သောရလဒ်များကိုဖြစ်ထွန်း
အပ်ဒိတ်: ဒီ 2018 NCOSE တင်ဆက်မှုအတွက် - porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်? - ဂယ်ရီ Wilson ကလေ့လာမှု ၅ ခုနောက်ကွယ်တွင်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်မှာဝါဒဖြန့်ချိသူများက၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်း၊ PCES ကို ၃၆း၀၀ မှ ၄၃:၂၀ အထိဝေဖန်သည်။
ဒီ post ဟာအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာအမှာစကားပြောကြား ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES)။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ PCES နေသူများကဖန်တီးသောစက္ကူ (အတူကြောင့်အလုပ်ပါပြီHald & Malamuth, 2008) ကြောင်းသတ္တိရှိရှိနိဂုံးချုပ်Young ကဒိန်းမတ်လူကြီးများညစ်ညမ်းသူတို့ဘဝအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အပေါ်အဓိကအားတစ်ဦးအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းယုံကြည်။ "
ယခုလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏“ မိမိကိုယ်ကိုမြင်သော” အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသာတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာထင်သလဲငါးကိုမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်မင်နီဆိုတာရှိကြီးပြင်းလာခြင်းကြောင့်သူမ၏ဘဝပြောင်းလဲသွားပုံကိုတစ်စုံတစ် ဦး အားမေးမြန်းခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်လူငယ်လူရွယ်များအားညစ်ညမ်းဆိုးကျိုးများအကြောင်းမေးမြန်းခြင်းသည်ည ၁၀း၀၀ တွင်ဘားသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နာယကများအားလုံး၏သောကြာနေ့ညတွင်ဘီယာမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုမေးမြန်းခြင်းနှင့်မတူပါ။ ထိုသို့သောချဉ်းကပ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၏ဆိုးကျိုးများကိုခွဲခြားမထားပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏အစီရင်ခံစာများကိုသုံးစွဲသူများမဟုတ်သူများ၏အစီရင်ခံစာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှထွက်သွားသောလူများနောက်လိုက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
၎င်း၏ဒိုင်နိုဆောလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်ကြသောရလဒ်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ (ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးမှုအရလေ့လာမှု၏အချို့ကောက်ချက်မှာအလွန်သံသယရှိသည်။ ) လေ့လာမှုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအချက်အလက်များကိုလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်က ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည် ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ streamingကြိုးမဲ့တစ်လောကလုံးခဲ့ရှေ့၌၎င်း, စမတ်ဖုန်းမီ။ ၏အစီရင်ခံစာများ ပြင်းထန် porn-related လက္ခဏာတွေ (အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောသုံးစွဲသူများအကြား) လွန်ခဲ့သောနှစ်ဝက်တစ်ဒါဇင်နီးပါးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည် မဟုတ်ကြဘူး ပြဿနာများ၏လမ်းအတွက်အများကြီးကိုသတိပွုမိ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကောင်းစွာကြိုဆိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကူအညီများ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ဗလာတစ်ဦးအဖြစ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချသည်ဟုငယ်ရွယ်သောဒိန်းမတ်လူမျိုးများ၏တွေ့ရှိချက်သည်ယင်း၏ခေတ်နှင့်မသင့်တော်ဟုထင်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် PCES မေးခွန်းလွှာကိုမကြာသေးမီကလေ့လာမှုတွင်အသုံးမချမှီအချိန်အထိကြည့်ရှုရန်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ PCES ကိုတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ၎င်းသည်အတိုင်းအတာအနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်“ အပြုသဘောဆောင်” ကြောင်းပြသရန်တီထွင်သူများ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အချို့သောကောက်ချက်များမှာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သည်။ အောက်ပါတို့ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ -
1. ပထမဦးစွာဒီလေ့လာမှု, အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပါ ၀ င်သည့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏သေးငယ်သောမှအလယ်အလတ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ထိုသို့သောစားသုံးမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, porn အသုံးပြုမှုကိုအစဉ်အမြဲအနည်းငယ်ရှိလျှင်, အားနည်းချက်များနှင့်အတူအကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။
2. ထို့ပြင် "အားလုံး variable တွေကိုညီမျှခြင်း၌ထည့်သွင်းခဲ့ကြပြီးနောက်, သုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံ variable တွေကို ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာပံ့ပိုးမှုများ လုပ်. အပြုသဘောသက်ရောက်မှုမှ- ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပိုမိုများပြားလာခြင်း။ ”
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်အသုံးပြုပိုမိုညစ်ညမ်း, ပိုအစစ်အမှန်သင်ကယုံကြည်လျက်, ပိုပြီးသင်ပြုလုပ်ရန်သင့်အသက်တာကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဧရိယာအတွက်ဆိုးကျိုးများပိုမိုအပြုသဘောဆောင် masturbate ။ အဘယ်သူမျှမနောက်နေ။
သုတေသီများ၏နိဂုံးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင် ၅ ကြိမ်အကျင့်ယိုယွင်းမှုများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအနှစ် ၃၀ ပိတ်ထားလျှင်ညစ်ညမ်းသည်သင်၏ဘ ၀ အတွက်အထူးအပြုသဘောဆောင်သောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးနေသည်။
စကားမစပ်အဆိုပါ PCES ရလဒ်များကိုအမှန်တကယ်လုပ်ခဲ့တယ် မဟုတ် အစစ်အမှန်အဖြစ် porn သိအကျိုးရှိသောကြောင်းကြေညာချက်ကိုထောကျပံ့။ သင်ဤ post ကိုအောက်ကလေ့လာမှုအချက်အလက်များ၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှတွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်အတော်လေးဆန့်ကျင်။
3. အများစုမှာသိသိသာသာအပေါင်းတို့၏, “ ယေဘုယျအားဖြင့်စားသုံးမှု၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အစီရင်ခံစာကိုတွေ့ရှိရသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်အပြုသဘောအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်း တစ်ဦး linear ဖက်ရှင် အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏနှင့်အတူ။ "
ဒါကြောင့်, ပိုတစျခုကသင်၏အသက်တာ၌ သာ. ကြီးမြတ်သည်၎င်း၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှုမြင်အဆိုပါ porn hardcore။ 15 နှစ်ကြားရှိအာရုံစူးစိုက်မှုကို: လည်းများပြားလှသောအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားနိုင်, သငျသညျဒါကြောင့်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများဆုံးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက် porn Watch ။
သုတေသီများပင်ရှိတယ်လို့ပြောနေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ ခေါင်းလောင်းကွေးအလယ်အလတ်အသုံးပြုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်အကျွံအားနည်းစေမည့်နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့တွေ့ရှိတာက "ပိုများသောအမြဲတမ်းပိုကောင်းတယ်။ " အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊
တကယ်တော့, PCES "တွေ့" ထို မဟုတ် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးထိခိုက်အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုဆောင်တတ်၏,
variable ၃ ခုကဘယ်လိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပိုများလေ၊ ဒါကတကယ့်အစစ်အမှန်လို့ထင်လေလေလုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ), နှင့်ပိုငျသညျမှ masturbate က-အမြဲပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာနဲ့ဆက်စပ်ရမည်လော
ပထမ ဦး စွာမည်သည့်နေရာ၌မှ“ ပိုများသောအရာသည်ပိုကောင်းသည်” ဘယ်နေရာမှာမျှပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိပါ။ ရေများများ၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုများပြားလာခြင်း၊ ဗီတာမင်ဓာတ်များများပြားလာခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တုဓာတ်များများပြားလာခြင်း၊ နေရောင်ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းများခြင်းများပိုမိုများပြားလာသည်။ နောက်ထပ် ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေသေစေနိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီတစ်ခုတည်းသောလှုံ့ဆော်မှုဟာအစွန်းရောက်ခြွင်းချက်တစ်ခုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး
သငျသညျအစဉျအမွဲသိအားလုံး porn အသုံးပြုမှုလျှင်ဒုတိယ, သင် (နောက်မှလအတွင်းအဘို့နှင့်များသောအားဖြင့်မဟုတ်) ဆေးလိပ်ဖြတ်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် PCES ၏မေးခွန်းများနှင့်၎င်းတို့တွက်ချက်ပုံသည်“ အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်” ကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ PCES သည်အမြဲတမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ ၃။ လိင်ဆိုင်ရာအသိပညာ၊ ၄။ အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတကိုတိုင်းတာသည့်အမျိုးအစား ၅ ခုရှိသည့်အမျိုးအစား ၅ ခုတွင်အဆင့်မြင့်ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရသည် ၅။ အထွေထွေဘ ၀ ။ ဤမယုံနိုင်လောက်သောတွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းသောသက်ရောက်မှုများ၏ရိုးရှင်းသောရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာကိုအသုံးချသည့်လေ့လာမှုတိုင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဥပမာ:
35 လေ့လာမှုများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနည်းခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအားဆက်စပ်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်။
70 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ် porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု - PCES တွေ့ရှိချက်များနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 40 လေ့လာမှုများကျော်.
လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှုအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုအတိုင်းအတာအမြိုးမြိုးမှလင့်များ porn အသုံးပြုမှုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
35 လေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆများအပေါ်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ PCES ပိုပြီး porn ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆီသို့ပိုကောင်းသဘောထားတွေ = ကပြောပါတယ်။ နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှုသဘောမတူ။
မေးခွန်း - ပိုမိုတိကျမှန်ကန်သောပုံကိုပေးသော - ၁။ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာကို အသုံးပြု၍ ရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများ၊ (၂) သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမသုံးခြင်း” သည်သင့်အတွက်အမှန်ပင်ဆိုးဝါးကြောင်းတွေ့ရှိရသောမှားယွင်းသောမေးခွန်းလွှာတစ်ခု (PCES) ။
ဘဝကိုဖို့ PCES မေးခွန်းများကိုလျှောက်ထားခြင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီနေ့ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးများနေရာတွင်ထားပါ။ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာမြင်နိုင်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး vanilla အမျိုးအစားများကသင့်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ သင့်အနေဖြင့်ဤကျယ်ပြန့်စွာဖော်ပြသောရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ခံစားနေရပြီး၊ အစစ်အမှန်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း၊ Erectile နှေးကွေးခြင်းသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောအရသာများရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ထူးခြားမှုမရှိသောလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည် porn ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိရန် (သို့) ပင်လျှင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးတော့ပါ မယုံသင်္ကာရှိအဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုသင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတာရှိမရှိ။
သင်၏အခြေအနေများအရ PCES တွင်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရမှတ်များထက်နိမ့်ကျသောအရာများဖြင့်သင်အဆုံးသတ်နိုင်မည်လား။ ငါတို့မစဉ်းစားဘူး7သည်မေးခွန်းများအတွက်အများဆုံးရမှတ်ဖြစ်သည်။ PCES မေးခွန်း ၄၇ ခုအနက် ၂၇ ခု (အများစု) က“ အပြုသဘောဆောင်” သည်။ သုတေသီများက“ လိင်ဆိုင်ရာအသိပညာ” သည်အပြုသဘောဆောင်နိုင်သည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ “ အပို” လိင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတမေးခွန်း ၇ ခုတွင်သူနှင့်မျှမတူပါ။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယူဆချက်တစ်ခုပါ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများစွာသည်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသူတို့မေ့သွားချင်သောအရာများမှ porn မှအရာများကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူလူငယ်သည်ဤနမူနာကို“ အပြုသဘောဆောင်သော” မေးခွန်းများကိုမည်သို့ရနိုင်သနည်း။
14 ။ ____ စအိုလိင်ဆက်ဆံသင့်ရဲ့အသိပညာကဆက်ပြောသည်ပြီလော “ အင်း၊ = 7"
15 ။ ____ အပြုသဘောဆန့်ကျင်ဘက်ကျား, မသင့်ရဲ့အမြင်ထိခိုက်ခဲ့ဖူးပါသလား "ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုထင်ပါတယ်။ porn ကြယ်များကပူသည်။ = 6"
28 ။ ____ ယေဘုယျအား, သင့်လိင်ဘဝတစ်ဦးအပြုသဘောဖြည့်စွက်ခဲ့သနညျး “ ဟုတ်တယ်၊ ငါမရှိရင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ = 7"
45 ။ ____ သင်ပိုမိုလိင်လစ်ဘရယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ဖူးပါသလား “ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ = 7"
ဒီနေရာမှာ“ အပျက်သဘော” ရှိသောမေးခွန်း ၂၀ မှအချို့သည်။
၂။ ____ သင်သည်လိင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသည်းခံမှုလျော့နည်းစေခဲ့ပြီလား။ "နောက်နေတာလား? ငါအပတ်တိုင်းနာရီပေါင်းများစွာကြည့်သည်။ = 1"
25 ။ ____ အသက်တာ၏သင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုလျှော့ချခဲ့ဖူးပါသလား “ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမရှိရင်ဘဝကိုစိတ်ကူးလို့မရဘူး။ ဒါဆိုမဟုတ်ဘူး။ = 1"
40 ။ ____ သင့်ရဲ့လိင်အသက်တာ၌ပြဿနာကိုဦးဆောင်နေခဲ့ဖူးပါသလား ငါမဟုတ်ဘူး၊ = 1"
46 ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွအခါ ____ ယေဘုယျအားဖြင့်, (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်း, ဥပမာ) သင်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ပေးထားသလဲ "နောက်နေတာလား? မဟုတ်ဘူး။ = 1"
ထို့နောက်သုတေသီများသည်သုံးစွဲသူများ၏အဖြေများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခဲ့သည်။ ၁) လိင်ဘဝ၊ ၂) လိင်နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထား၊ ၃) လိင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ ၄။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အမြင် / သဘောထား၊ ၅) အထွေထွေဘဝ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတအမျိုးအစားနှင့်မတူဘဲအခြား ၄ မျိုးတွင်“ အပြုသဘောဆောင်သော” နှင့်“ အပျက်သဘောဆောင်သောမေးခွန်းများ” နှစ်ခုရှိသည်။ ဤအမျိုးအစားများအတွက်သုတေသီများကအပြုသဘောဆောင်သည့်ပျမ်းမျှအားအနှုတ်လက္ခဏာပျမ်းမျှထက်မြင့်မားခြင်းရှိ / မရှိကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြသခြင်းမရှိဘဲ 1 အမျိုးအစားများအတွက် "အပြုသဘော" နှင့် "အနှုတ်လက္ခဏာ" မေးခွန်းပျမ်းမျှအကြားခြားနားချက်များကိုပေး အမှန်တကယ် ငယ်ရွယ်ဒိန်းမတ်၏ပျမ်းမျှ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်“ အပြုသဘောဆောင်သော” မေးခွန်းအချို့အားတုံ့ပြန်မှုသည်နွေးထွေးမှုရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ သို့သော်ဆက်စပ်သော“ အပျက်သဘော” မေးခွန်းမေးခွန်းများသည်အလွန်နိမ့်ကျသဖြင့်၎င်းတို့အကြားပြန့်နှံ့မှုသည်မှားယွင်းသောပုံကိုဖော်ထုတ်ရန်အလုံအလောက်ကျယ်ဝန်းသောကြောင့်ဒိန်းမတ်လူမျိုးများခံစားခဲ့ရသည်။ တကယ်တော့၊ သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာတကယ်အကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပေမယ့်၎င်းင်းကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့အန the တရာယ်ကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ခုလုံးကို PCES View)
ဤအရာသည်နားမလည်ပါကအောက်ဖော်ပြပါရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ။ ရွယ်တူချင်းပညာရှင်များကစိတ်ပညာသုတေသနကိုမကြာခဏပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်သုတေသီများ၏သီအိုရီကိုဆန့်ကျင်။ အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အပြာညစ်ညမ်းမှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည်ဟူသောအယူအဆနှင့်ဆန့်ကျင်။ အမျိုးသားများသည်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် အနုတ် ကဏ္ two နှစ်ခုမှအမျိုးသမီးများထက်ဆိုးကျိုးများ - Sex Life and General in Life ။ သုတေသီများသည်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုမဆွေးနွေးပါ၊ ၎င်းသည်သူတို့၏အပြုသဘောဆောင်သောကောက်ချက်ကိုမလွှမ်းမိုးပါ။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျ၎င်းငျးတို့ကိုစိတျဝငျစားစရာရှာဖွေတယျ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ နှင့် သည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများ ဘဝလျော့နည်းပျော်စရာပါစေ။
အပြင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားအနေဖြင့်ဤနေရာတွင်အထက်ပြောကြားခဲ့ကြသည်သည့် PCES အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုရိသောအယူအဆရေးရာပြဿနာများကိုအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
အသက်တာ၏အရည်အသွေး, ဆက်ဆံရေးမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်တစ်ဦးလည်းမရှိခဲ့ချေလိင်ဘဝလျှော့ချ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်လိင်ဆီသို့ပိုပြီးလစ်ဘရယ်သဘောထားတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူအတူ PCES အတွက်တန်းတူအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
ယောက်ျားများစွာသည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ (သို့မဟုတ်ယခင်ကပင်) မှညစ်ညမ်းရုပ်ကိုသုံးခဲ့ကြသော်လည်းမည်သည့်အခါကမှစစ်မှန်သောလိင်မဆက်ဆံကြပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်၎င်းတို့၏လိင်ဘဝအပေါ်သူတို့၏အမြင်များကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသူတို့မသိနိုင်ပါ။ အဘယ်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်? ဒီလူတွေအတွက်၊ PCES မေးခွန်းတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်တည်မှုကိုမေးခြင်းနှင့်တူညီသည် သင့်ရဲ့ မိခင်ရဲ့ကလေးကမင်းဘဝကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်
ယောက်ျားအများစုသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်လက္ခဏာများကိုသူတို့မသုံးမီလများအထိ၊ အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြပါ ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများ (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံး, ပြင်းထန် uncharacteristic စိုးရိမ်ပူပန်, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများဒါမှမဟုတ် စိတ်ကျရောဂါ) ယခုလက်ရှိအသုံးပြုသူအနည်းစုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုချိတ်ဆက်မိလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် PCES ၏“ ဘဝအရည်အသွေး” ကိုထိခိုက်စေသည့်အသုံးအနှုန်းများကြောင့်
တနည်းအားဖြင့်သင့်အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲသွားနိုင်ပြီးသင့်တွင်နာတာရှည် ED ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ PCES ရမှတ်သည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်ကိုပြသနိုင်သည်။ တကယ်လို့အကယ်လို့သင်ဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးမပြုတဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူသားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ vanilla လိင်အလေ့အကျင့်တွေအကြောင်းကိုသာသိနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်ဟာ porn ကိုအသုံးမပြုတာကသင့်ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေတယ်လို့အလွယ်တကူဆိုလိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်နေသော porn အသုံးပြုသူတစ် ဦး က PCES ကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်တွင် -
ငါတက္ကသိုလ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီ၊ အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်အတူပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်၊ ရည်းစားမရှိခဲ့ဘူး၊ သူငယ်ချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအကြွေးတင်နေသည်၊ ED ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဘဝတွင်လိင်နှင့်လုံးဝမဆက်ဆံဖူးပါ။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးငါ porn ကြယ်ပြုမူသမျှအကြောင်းကိုငါသိ၏နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရာထူးအပေါငျးတို့သမြန်ဆန်မှတက်ဖြစ်၏။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ အခြေခံအားဖြင့် porn ကငါ့ဘဝကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူး။ ”
“ ငါ dildo ကိုစအိုတစ်ခုထဲကျွမ်းကျင်စွာဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာကငါ့ကွန်ပျူတာမှာတွေ့ခဲ့တာတွေကြောင့်ငါ့ရဲ့ကလေးတွေဟာတခြားမြို့မှာနေကြတယ်။ ”
အဘယ်မှာရှိလေ့လာမှုများအရှိဆုံးမှာ-အန္တရာယ်အုပ်စုသည် (လူပျိုတို့) သူတို့ ပို. ပို. ယနေ့သတင်းပို့ကြသည်လက္ခဏာတွေ၏မျိုးစုံထုတ်ဖေါ်မယ်လို့မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခြင်းလဲ? ကဲ့သို့,
“ အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ပါသလား မပါဘဲ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုလား”
"သင်စတင်ခဲ့သောအင်တာနက် porn အမျိုးအစားများကိုအဆုံးအထိတက်နိုင်သေးသလား"
“ အင်တာနက် porn ကိုစသုံးပြီးကတည်းကမင်းရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိုသံသယဝင်လာပြီလား”
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့စိုက်ထူမှုများကိုသင်၏မိတ်ဖက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်မိတ်ဖက်များနှင့်ပြproblemsနာများကိုသတိပြုမိပါသလား။ ”
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုစဉ်သင်၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောသင်၏စွမ်းရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်ပြtheနာကိုသတိပြုမိပါသလား။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကနေလာမယ့်သုတေသနထုတ်ဖော်နေပါတယ် ကြောင်း porn အသုံးပြုမှုကိုစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဤအအာရုံကြောလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို (နှင့်လာမည့်လေ့လာမှုများ) 280+ နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည် အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု”အများအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည် PCES ၏“ ရလဒ်များ” နှင့်ဆန့်ကျင်စွာပင် 80 လေ့လာမှုများကျော် ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စပြuseနာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းစေခြင်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အများပြည်သူအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြtoနာများ၊ အခြားပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်အခါဖြေရှင်းသည့်စွဲလမ်းမှုများကိုသတင်းပို့ပါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သည်ဟုလူအများအားဖျောင်းဖျပြောဆိုရန်မည်မျှပင်လိမ္မာပါးနပ်သောမေးခွန်းလွှာများဆောက်လုပ်ထားသည်ဖြစ်စေသိသာထင်ရှားလာသည်။ အရေးကြီးသောနည်းလမ်းများအတွက်။ ယနေ့မြန်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုသူများအတွက် porn သည်“လိင်-အနုတ်လက္ခဏာ။ "
အာဏာပိုင်များအကြားပဋိပက္ခကြောင့်ကောင်းတစ်ဦးသတိပေး စံတန်ဖိုး သေချာပေါက်၏အာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး သာမန်။ ၎င်းသည်“ စံနှုန်း” နှင့်ဘုံအပြုအမူသည်“ ပုံမှန်” သို့မဟုတ်“ ကျန်းမာခြင်း” ပင်ဖြစ်သည်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ရန်အလွန်တိုတောင်းသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး "ပုံမှန်" အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည် ကျန်းမာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ parameters တွေကိုအတွင်း။ မည်မျှပင်လူတစ် ဦး သည်အပြုအမူတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်နေသည်သို့မဟုတ်မည်မျှကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရောဂါဗေဒဖြစ်ပေါ်လျှင်တရား ၀ င်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသီများကရလဒ်ကို“ ပုံမှန်” ဟုမသတ်မှတ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စဉ်းစားပါ။ ဒီနေ့ခေတ်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်များက ED ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နံပါတ်များကိုသတင်းပို့နေကြပါတယ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလှူ နှင့် ဟောင်း porn အသုံးပြုသူများသည် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ overconsumption နှင့်အတူချိတ်ဆက်နေကြသည်။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို PCES မေးခွန်းလွှာ၏ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခေါင်းစဉ်များနှင့်နိဂုံးချုပ်များကိုကျော်။ ဖတ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကိုဆန်းစစ်ပါ။ သုတေသီများသည်ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများမှဖော်ပြသောပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်လော။ porn-use variable ကိုဖယ်ရှားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသူများကိုယခင်သုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သလား။ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသောအပြုသဘောဆောင်သောအချက်အလက်များကိုသာထုတ်ယူနိုင်သည့်မေးခွန်းများကိုသူတို့မေးခဲ့သလား။ သက်သေအထောက်အထားများကိုစုဆောင်းပြီးတာ ၀ န်ယူမှုရှိစွာဆန်းစစ်ခဲ့ပါသလား။ သုတေသီများသည်သူတို့၏ဘာသာရပ်များကိုစွဲလမ်းမှုအတွက်စမ်းသပ်မှုအသစ်ကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ခဲ့သလား s ကို-IAT (Short-ပုံစံကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း) ဒီကတီထွင် ဂျာမန်အသင်း?
ထို့ထက်ကားမိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ညစ်ညမ်းသောလေ့လာမှုများကိုသံသယရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် porn ၏အမှန်တကယ်ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးရလဒ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားဘာမျှမဖော်ပြနိုင်သော်လည်း၊ သူတို့သည်သိပ္ပံနည်းကျအသံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ခေါင်းစီးများဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ၊ မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များနှင့်လက္ခဏာများကြားမှဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမှီခိုအားထားလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပိုမိုမကြာသေးမီကိုကြည့်ပါတက္ကသိုလ်နှင့်အဝန်းနမူနာအတွက် arousal-oriented အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ self-Appraiser။ " ၎င်းသည် PCES ၏အတိုကောက်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အံ့အားသင့်စရာတော့မဟုတ်ပါကပါဝင်သူများသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းမှအနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များထက်သာလွန်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ၏အန္တရာယ်မှာ၎င်းတို့သည်“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုအလုံအလောက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်သည်” ဟူသောမှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်ကိုမသိမသာမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးများအားသကြားနှင့်အမျှသီးနှံများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုစိတ်ချစေသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မှာဤအရာသည်တန်းတူဖြစ်သည်။
မကြာခဏပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစိတ်ပညာသုတေသနစေ့စေ့ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးကအဓိကတက္ကသိုလ်တခုအကြီးတန်းပါမောက္ခသည်, PCES နည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်:
အတူတစ်ဦးကအဓိကပြဿနာ ဒီလေ့လာမှုက သုတေသီများက၎င်းတို့သည်အသုံးအနှုန်း၏အသုံးအနှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍“ အပြုသဘောဆောင်သော” နှင့်“ အပျက်သဘောဆောင်သော” အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြေးခွံများကို ဦး စားပေးပုံစံဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်က၎င်းတို့အားတစ် ဦး ချင်းပစ္စည်း၏အဆင့်ထက်ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားသောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအတိုင်းအတာများအဆင့်တွင်အချက်ဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ရန်သူတို့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် item-level factor analysis အားပြုလုပ်ခဲ့ပါက၎င်းတို့သည်တူညီသောlifeရိယာ (လိင်ဘဝ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်စသည်တို့) ကိုဖြေရှင်းသည့်အရာများသည်သီးခြားအပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာအချက်များပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲတူညီသောအချက်ပေါ်တွင်တင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤရလဒ်ကိုရရှိပါက၎င်းသည်ပစ္စည်းများသည်သီးခြားအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများထက်အဆိုးမြင်ခြင်း - အပြုသဘောဆောင်ခြင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသာရလဒ်ဖြစ်လျှင်၊ ပျှမ်းမျှရမှတ်သည်အဆိုးမြင်ခြင်းထက် ပို၍ အကောင်းမြင်ခြင်းရှိ / မရှိကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပျှမ်းမျှရမှတ်သည်အလယ်ပိုင်းအမှတ်ထက်မြင့်သောကြောင့် (ဥပမာအမှတ် ၈ မှ ၅၆ အထိကွဲပြားနိုင်သော ၇ ချက်အဆင့် Likert စကေး> ၂၄) ၎င်းသည်ရမှတ်သည်အမှန်တကယ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ Self- အစီရင်ခံစာများကိုဤနည်းဖြင့်တန်ဖိုးဖြင့်လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သူတို့လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့လူတွေကိုအုပ်စုတစုကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ခိုင်းတယ်။ ဆောင်းပါး၏နိဒါန်းတွင်မီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ပထမနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမြင်များကိုဆွေးနွေးနေသောကြောင့်သုတေသီများကဤပြproblemနာကိုသတိထားမိပုံရသည်။ ထိုအခါသူတို့သည်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုနှင့် Self- သဘောထားအမြင်များနှင့် Self- အစီရင်ခံစာများယူပါ။
... နည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့ t-tests အသုံးပြုခြင်းပြaticနာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ သင်သည် t-tests တွက်ချက်ခြင်းနှင့်ဇယား ၄ တွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ယင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထွေထွေအသက်အတွက်အထွေထွေရမှတ်များအတွက် ၁.၁၅ မှတ်ကွာခြားချက်ကိုယူပါ။ အဆိုပါသုတေသီများသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုဆိုလိုတာ, အမှန်တကယ်နည်းလမ်းများသတင်းပို့ကြဘူးဒါဆိုနည်းနည်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်။ နမူနာသည်ယေဘူယျအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောဘ ၀ ၏ ၂၄.၁၅ ရမှတ်နှင့် ၂၃.၀၀ တွင်အနှုတ်သက်တမ်းကိုယေဘူယျအတိုင်းအတာရှိခဲ့သည်ဆိုပါစို့ (နှစ်မျိုးစလုံးသည် ၄ ​​ခု၊ ၇ ဆင့်သော Likert အကြေးများဖြစ်သည်။ သို့မှသာရမှတ်များမှ ၄ မှ ၂၈ အထိကွဲပြားနိုင်သည်) ။ ယင်းသည်ထူးခြားသောခြားနားချက်ဖြစ်ရန်ရမှတ် ၂၃ သို့မဟုတ် ၂၄ သို့မဟုတ်အခြားစကေးတစ်ခုတွင်အခြားစကေးအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုရမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောကြောင့်တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအရအလယ်မှတ်ထက်ရမှတ်ကို“ ပျမ်းမျှအထက်” ဟုမယူဆနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် အဆိုပါနည်းလမ်း 24.15 နှိုင်းယှဉ် 23.00 သို့မဟုတ် 6.15 နှိုင်းယှဉ် 5.00 တူတစ်ခုခုဖြစ်လျှင်ကျနော်တို့မသိရပါဘူး, အရာဧကန်အမှန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအနက်ထိုက်ပေသည်။
တိုတိုပြောရရင်, ငါဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့လျှင်, ငါမလုံလောက်စာရင်းအင်းနည်းစနစ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအယူအဆဆိုင်ရာပြproblemsနာများအပေါ်အခြေခံပြီးကငြင်းပယ်လိမ့်မယ်။ ... အချက်အလက်များ၏သဘောသဘာဝအရခိုင်မာသောကောက်ချက်ဆွဲရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပထမ ဦး စွာသုတေသီများသည်လိင်ဆိုင်ရာအသိပညာကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာဟုယူဆသောကြောင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတအတိုင်းအတာကို၎င်းတို့၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အခြားအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းလေးမျိုးနှင့်မတူဘဲ၊ လိင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်သက်ဆိုင်သောအပျက်သဘောဆောင်သောဗားရှင်းမရှိပါ။ ငါသိသလောက်ပြောရလျှင်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတအတိုင်းအတာကိုချန်လှပ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုစီ၏အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာဗားရှင်းများအကြား t-tests ပြုလုပ်သောအချိန်ဖြစ်သည် (ဇယား ၄) ။ ၎င်းသည်လိုအပ်ချက်မရှိခြင်း - အပြုသဘောဆောင်သောလိင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အနှုတ်လက္ခဏာဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအသိပညာမရှိခဲ့ပါ။
သင်မမေးမြန်းခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတအတိုင်းအတာကိုမှတ်ချက်ပေးရန်မတတ်နိုင်ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ စကေးပေါ်ရှိရမှတ်များမှာပါ ၀ င်သူများ၏ဗဟုသုတရရှိခြင်း၏အမြင်များကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများကြိုက်နှစ်သက်သည်ဟုသူထင်သောယောက်ျားအတွက်ကံကောင်းပါစေ။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗဟုသုတရှိခြင်းသည်အသိပညာမရှိခြင်းထက်အမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်သောအရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း၊ အပြုသဘောဆောင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်အဆိုးနှိုင်းယှဉ်မှုရှိသင့်သည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ ပစ္စည်းတချို့ကိုတောင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်တယ်၊ ဥပမာ -“ မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုငါမြင်ခဲ့တယ်။ ” ငါမလိုချင်သောအရာများကိုသင်ယူခဲ့သည်။ သုတေသီများသည်“ အကောင်းမြင်ခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ ယူဆချက်များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်း (ဥပမာလိင်လစ်ဘရယ်ဖြစ်ခြင်း, စမ်းသပ်ခံ) ဒိန်းမတ်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
စကေးသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာမှု၏အခြေခံအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပညာရှင်များစွာပင်နားမလည်နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ Hald-Malamuth လေ့လာမှုက PCES ကိုအတည်ပြုပြီးပြီလို့ပြောရရင်လုံးဝဆိုးဝါးလှပါတယ်။ တစ်ခုမှာလေ့လာမှုတစ်ခုတည်းဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ၏တရားဝင်မှုကို စမ်းသပ်၍ မရပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ၏တရားဝင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအကြိမ်များစွာပါ ၀ င်သောနှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အတိုင်းအတာတစ်ခု၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာသင်ယူသော်လည်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု၏တရားဝင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမတည်မြဲစေသည့်အဆုံးမဲ့အဆုံးသတ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်အတည်ပြု၏အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက် Lee က Cronbach နှင့်ပေါလု Meehl က 1955 ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ Read နှင့်နားလည်ကြောင်းနှင့်သင်အရှိဆုံးစိတ်ပညာရှင်ထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်တရားဝင်မှုအကြောင်းပိုမိုသိကြလိမ့်မည်: http://psychclassics.yorku.ca/Cronbach/construct.htm.
ဤတွင် Cronbach-Meehl ဂန္ထဝင်အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုအတိုင်းအတာသည်တရားဝင်မှုရှိသည်ဟုပြောရန်ဆိုသည်မှာအတိုင်းအတာပေါ်ရှိရမှတ်များကွဲပြားမှုများသည်ဆောက်လုပ်ရေးအခြေခံသီအိုရီမှကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ပုံစံဖြင့်အခြားသောတိုင်းတာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု၏တရားဝင်မှုကိုလူအုပ်စုများကိုစီမံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သီအိုရီအရစမ်းသပ်မှုတွင်ဖော်ပြသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ စမ်းသပ်မှုမှရမှတ်များကအခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်သည် သီအိုရီ။ အတည်ပြုခြင်း၏ရလဒ်များသည်များသောအားဖြင့်အချို့သောထောက်ခံသူများနှင့်အတည်ပြုသောတွေ့ရှိချက်များနှင့်ရောနှောလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏ဘယ်လောက်မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတန်ကြာမသတ်မှတ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်သေအထောက်အထားများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ရလဒ်များသည်အပျက်သဘောဆောင်သော်ငြားလည်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုသည်ခိုင်လုံမှုမရှိသလား၊ ဟောကိန်းထုတ်သည့်သီအိုရီတွင်မှားယွင်းမှုရှိမရှိသေချာစွာမပြောနိုင်ပါ။ သိပ္ပံပညာတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်နားလည်ထားသည့်အတိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းသည်သီအိုရီစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
Hald-Malamuth လေ့လာမှုတွင်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှုမေးခွန်းလွှာ (PCQ) ၏အတည်ပြုချက်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရှည်လျားသောအပိုင်းရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုမှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများ၏ Hald နှင့် Malamuth ၏အလွတ်သဘောသီအိုရီအရသိမြင်နိုင်သောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသင့်သည်။ ဇယား ၁ နှင့် ၂ တွင်ဤခန့်မှန်းချက်ကိုအတည်ပြုသောရလဒ်များကိုတင်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအား PCQ ၏တရားဝင်မှုကိုထောက်ခံသည်။ သုတေသီများကအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သုညနှင့်ဆက်နွှယ်သင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်) ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည် သူတို့ဇယား 1 နှင့်2အတွက်ငါးအပြုသဘောသက်ရောက်မှုအကြေးခွံများနှင့်လေးအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအကြေးခွံများအကြားဆက်စပ်မှုသတင်းပို့ကြပါဘူး။ ငါသူတို့ disconfirming သတင်းအချက်အလက်ပုန်းအောင်းနေကြသည်သံသယ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အပြုသဘော PCQ များ၏ပေါင်းလဒ်အားလုံးအနုတ်လက္ခဏာ PCQ အကြေးခွံများပေါင်းလဒ်နှင့်အတူသာ, r = .07 ဆက်နွယ်နေပါသည် scales, ဒါပေမယ့်သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့အပြုသဘောသက်ရောက်မှုငါးအမျိုးမျိုးနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏လေးမျိုးတို့တွင်ဆက်စပ်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဆီးအတားအဘယ်ကြောင့်ငါတွေးမိကြောင်းသတင်းပို့ကြပါ ။
Hald နှင့် Malamuth အစီရင်ခံစာ, သူတို့ကသင့်ပါတယ်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့အကြေးခွံများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရခန့်မှန်းခြေ, ဤနံပါတ်များအားလုံးအလွန်ကောင်းနေတယ်။ သို့သော်ယုံကြည်စိတ်ချရတရားဝင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကစကေးဿုံယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပေမယ့်နေဆဲကောင်းသောတရားဝင်မှုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏။
ထို့နောက် Hald နှင့် Malamuth တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများသီအိုရီနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး PCQ ၏တရားဝင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်ယူဆချက်သုံးခုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးယူဆချက်ကတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများဟာရိပ်မိသည့်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများထက်သာလွန်သည်။ ဇယား ၄ တွင်ဖော်ပြထားသောဤဆန်းစစ်လေ့လာချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့်အရာနှင့်အညီကျွန်ုပ်သည်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုတစ်ခု၏နည်းလမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သော t-tests ပြုလုပ်ရန်သုတေသီများအနေနှင့်မသင့်လျော်ပါ။ အပြုသဘောသက်ရောက်မှုစကေးအပေါ် "4" ၏သက်ဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေးအပေါ်တစ် ဦး "3" ကဲ့သို့တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။ ပါဝင်သူများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများထက်အပြုသဘောဆောင်ရန်အစီရင်ခံလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုစကေးရှိ“ 3” သည်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေးရှိ“ 3” နှင့်ပိုတူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ ဒေတာများကိုမည်သို့စုဆောင်းသည်ကိုမသိနိုင်ပါ။ ဒီတော့ စားပွဲတင်4အစီရင်ခံရလဒ်ဆားတစ်ဦးသည်အလွန်ကြီးမားသောဘောဇဉ်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရမည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုဆား shaker ။
ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ် စာရေးသူအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ်, စားပွဲတင်4အတွက်ရယ်စရာလှည့်ကွက်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားအစီရင်ခံ၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအကြေးခွံ (သူတို့စားပွဲတင်5အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့ပြုကဲ့သို့) နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဆိုလိုတယ်, သူတို့ဆိုလိုသာသတင်းပို့ ကွဲပြားခြားနားမှု. ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသားများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများအကြားပျမ်းမျှခြားနားချက်မှာ ၁.၅၄ ဖြစ်သည်။ သငျသညျဤ 1.54 လူတို့သညျအဘို့အခြို့သောအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်5နှင့်ယောက်ျားအတွက်ခြုံငုံအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှု 1.54 အကြားခြားနားချက်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဇယား 2.84 ကိုသွားပါ။ သေချာတာပေါ့၊ ၁.၅၄ ကွာခြားချက်ကို Cohen ရဲ့ D အရသိသိသာသာသိသိသာသာကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်အပြုသဘောစကေး ၃ = အနုတ်စကေး ၃ လို့ယူဆမှသာလျှင်။ သို့သော်အကောင်းမြင်အမှတ်၏ ၂.၈၄ ၏ ၁-၇ စကေး၏ပကတိတန်ဖိုးကိုကြည့်ကြပါစို့။ 1.30 သည်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး ၁ တစ်ဝက် (လုံးဝမရ) မှ ၇ အထိ (အလွန်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ) ဖြစ်သောကြောင့် ၂.၈၄ သည်လုံးဝသဘောမတူပါ။
သုတေသီများ၏ဒုတိယယူဆချက်မှာအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပါးခြင်းများဖြစ်သည်ဟုဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကပိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုသတင်းပို့ယောက်ျား ပတ်သက်. ခန့်မှန်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ဘဝနှင့်ဘဝသူတို့၏သီအိုရီမှဆန့်ကျင်အတွက်, ယောက်ျားလည်းနှစ်ခုဒေသများရှိ [အမျိုးသမီးတွေထက်] သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖြစ်စေယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်နည်းပါးလာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရိပ်မိသောထိုသူတို့၏အကြေးခွံများတရားဝင်မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သီအိုရီတွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိသေး၏။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုတေသီကျိုးကြောင်းဆီလျော်နောက်ခံအကြောင်းရင်းများညစ်ညမ်း၏ရိပ်မိဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သောမည်အကြောင်းတည်း hypothesize နှင့်ခန့်မှန်းတဲ့အတိုင်းဒီအချက်တွေထဲကတချို့ပတျသကျခဲ့ပေ။ အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများအတွက်အကြီးဆုံးဆက်စပ်မှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, r = .51 နှငျ့အတူရှိ၏။ အပြင်းထန်ဆုံးအသုံးပြုသူများအများဆုံးအပြုသဘောသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရန်လေ့။ သုတေသီအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အသိအမှတျပွု, ဒီဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိချက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်းဟာအမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်ပေါ်စေသလဲ၊။ စံချိန်တင်အဘို့, သုတေသီဒီဆွေးနွေးရန်မလိုပေမယ့်, စားပွဲတင်6လည်းစားသုံးမှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားတစ်ဦးအပြုသဘောဆက်စပ်မှုကိုပြသ, r = .10 ။ ဒါဟာသေးငယ်ပေမယ့်ကစာရင်းအင်းသိသာသည်။
သုတေသီ (တကယ်တော့, နောက်ပြန်) လုံးဝမှားယွင်းနေတယ်အရာတစ်ခုမှာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုအတွက်သရုပ်မှန်၏ဒီဂရီအကြားစပ်လျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။ စားပွဲတင်6စားပွဲတင် 25 အတွက်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် (β = -.22) က (r = -.7) အပျက်သဘောဆောင်သောစပ်လျဉ်းကြောင်းပြသထားတယ်, ဤအနှုတ် beta ကိုအလေးချိန်ကအတည်ပြုသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုဆိုလို အဆိုပါ porn ပိုလက်တွေ့ကျသည် နည်းသော အပြုသဘောဆောင်သည့်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဒါပေမယ့်ဆောင်းပါး၏စာရေးဆရာများအပေါ်သွားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် (မှားယွင်းတဲ့) အနက်ကိုဖော်ပြပေါ်ကြောင်းသရုပ်မှန်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်။ အလိုလေး!
ဤမှတ်ချက်များသည်အထောက်အကူပြုမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်မှာမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိသေးတာကိုကျွန်တော် ၀ မ်းသာစွာတုံ့ပြန်ချင်ပါတယ် (အလေးပေးဖော်ပြထားသည်)
PCES ရှိအားနည်းချက်များကြောင့် Hald နှင့်တွဲဖက်စာရေးသူများသည်“ တိုတောင်းသောပုံစံ” ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်း: အညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေး၏တစ်ဦးက Short-Form ကိုဗားရှင်း